Flexible Metallic rukoti Vagadziri & vanotengesa - China Flexible Metallic Rukoko Factory
JSG-Type Enhanced mugero
JSG hosipaipi kwakakurudzira simbi waya ine yakanaka ngura kuramba yakarukwa pamadziro musimboti weJS chubhu, uye ine yakanaka kupisa kuramba, inoshandiswa kwakanyanya tembiricha nharaunda.
Zvivakwa zvePVC / PU sheathing simbi konduru ndeStrip-ronda kwakakurudzira esimbi rukoronga, yakavezwa mbiri PVC sheathing uye Zinc yakavezwa simbi bhandi ichitenderera, yakakomberedzwa chimiro, TPU sheathing. Iwo murazvo-unodzora iV0 (UL94). Dziviriro degree iri IP68.
Ipfupi tsananguro Iyo dziviriro degree iri IP40. Zvivakwa zvesimbi rukoroti zvinoshanduka, kutambanudza, lateral kumanikidza kusagadzikana. Chimiro chiri chezinc yakafukidzwa nesimbi bhandi ronda, yakakwenenzverwa mbiri uye tambo-ronda kwakakurudzira esimbi mugero.
Isimbi isina simbi hosipaipi chikamu chakakosha muindasitiri yemazuva ano. Stainless simbi simbi hoses anoshandiswa sewaya uye tambo yekudzivirira machubhu ewaya, tambo, otomatiki chiridzwa masaini, uye ehurumende yekugezesa hoses, ine zvakatemwa kubva 3mm kusvika 150mm. Iyo diki-dhayamita simbi isina simbi hosipaipi (yemukati dhayamita 3mm-25mm) inonyanyo shandiswa kuchengetedza cenzwi redunhu reiyo chaiyo Optical mutongi uye kuchengetedzwa kwemaindasitiri sensor wedunhu.
Simbi Rukoti Iine PVC Sheathing
Iwo machubhu anodzivirira anoshandiswa kupfeka mawaya netambo munzvimbo dzakasiyana siyana anowanzo kuve murazvo-unodzora PVC-yakavharwa simbi hoses, iyo isingagone chete kudzivirira waya netambo, asi zvakare kudzivirira magetsi emoto kubuda. ivo vanogona zvakare kuronga mitsara uye kuzadzisa akanaka mhedzisiro.
Simbi Rukoti Ne PU Sheathing
Mapurasitiki akavharirwa simbi hoses akagadzirwa nesimbi dzesimbi hoses uye kwakakurudzira simbi hoses, yakaputirwa netaundi rePU zvinhu padivi peiyo concave uye convex pamusoro penzvimbo yeiyo chubhu madziro. Nekuda kwekunakirwa kwehuremu hureruka, kugona kushanduka, kubatana kwesimba nezvinhu, magetsi kuita, kuramba mafuta, kushambidza kwemvura, nezvimwewo, iro repurasitiki-rakafukidzwa simbi hosi inoshandiswa zvakanyanya musimba, kemikari, simbi, indasitiri yakajeka, michina uye mamwe maindasitiri.